साहित्यकार हिरण्य कुमारी पाठक,(बासु श्रेष्ठ)
अमेरिकी भ्रमणमा रहनु भएकी कथाकार, गुन्जन स्महिला साहित्यिक समुहको सदस्य तथा 'नारीश्वर'का प्रधान सम्पादक हिरण्यकुमारी पाठकसँग गरिएको साहित्य सम्बन्धि छलफल:
महिला साहित्यकारहरुको उत्थानकोलागी के गर्नुपर्छ?
पुरुष साहित्यकारको दाँजोमा महिला साहित्यकारको अवश्था कस्तो छ?
महिला साहित्यकारहरुको समस्या र बाधा के हुन्?
कुन विधामा महिला साहित्यकारको बढी सहभागिता छ?
महिला साहित्यकारहरुले भोग्नु परेका भेदभावहरु के हुन्?
गुन्जन र नारीश्वर के हुन्?